Toby Fitrandrahana Volamena Mandrahona Ny Fambolen’ny Vondrom-piarahamonina Ao Makedonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2018 16:58 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Tamin'ny andro iray tamin'ny taona 2012, nahazo sonia fifanekena telo momba ny fitrandrahana tamin'ireo 86 nosoniavin'ny governermanta Makedoniana teo aloha, teo ambanin'ny antoko ara-politika elatra havanana VMRO-DPMNE ny COPIN (amin'ny alalan'i Sardich MC). Nitondra nanomboka ny Aogositra 2006 hatramin'ny volana Mey 2017 ity antoko ity ary nibahana betsaka ny fiampangana fisian-kolikoly goavana nahatonga ny fionganany teo amin'ny fahefana.
Nanohitra ny fitrandrahana ny maro an'isa raha nahitàna taha-pahavitrihana vitsy kosa ny faritra hafa na tsy nahatratra ny isam-bato ilaina. Ny tanàna kelin'i Gevgelija no nahitàna fitsapa-kevi-bahoaka voalohany nahomby izay olona 13.000 no nifidy nanohitra ny fitrandrahana ary 154 ihany no nanohana izany. Tao amin'ny tanàna kelin'i Valandovo izay marobe no nanohitra ny fitrandrahana, tsy nahatratra ny isa nilaina mba hahatonga ny latsa-bato ho ara-drariny ny fitsapa-kevi-bahoaka, satria banga 300 ny vato.
Hiparitaka manerana ny tany mirefy 287 hekitara izay rakotra ala sy kesika ankehitriny ny toeram-pitrandrahan'i Kazandol. Hotanterahina an-tafo lanitra ny fitrandrahana akora. Hotanterahina amin'ny alalan'ny fanapoahana vanja ny fandavahana ny toeram-pitrandrahana ary hosarahina amin'ny vatolampy ny varahina sy ny volamena amin'ny fampiasana ny dobo eo an-toerana miaraka amin'ny asidra sôlfôrika. Milaza mazava ny Fikarohana momba ny Fanombanana ny Fiantraika Ara-tontolo iainana: Toeram-pirandrahana Kazandol, Valandovo, Makedonia hoe:
Angel Nakov avy amin'ny Hetsiky ny Olom-pirenena “Spas za Gevgelija” (“Fanavotana an'i Gevgelija”) nilaza hoe:
Malaza amin'ny fitomboan'ny voankazo Mediteraneana sy voajanahary, tahaka ny ampongabendanitra, paoma, paiso, serizy, aviavy sy paoma japoney tsy fahita firy ny renirano Kazandolska sy ny Renirano Anska miampita ny toeram-pitrandrahana Kazandol sy ny faritra. 45 kilometatra monja miala ny toerana Kazandal, tetikasa Ilovitsa, sy fitrandrahana harena an-kibon'ny tany hafa no misy ny tampon'ny faritra be tendrombohitra ao Strumichko Pole, sompitry ny voankazo sy ny legioma ao Makedonia.
Nanandra-peo nanohitra ny fitrandrahana ny Hetsiky ny Olom-pirenena Spas za Valandovo (“Famonjena ho an'i Valandovo”) naorin'ireo mpikatroka avy ao Valandovo, tanàna efatra kilaometatra monja miala ny toeram-pitrandrahana Kazandol. Nikarakara sakan-dalana roa sy hetsika maromaro izy ireo mba hanehoana amin'ireo manampahefana fa tsy manaiky ny fitrandrahana hanimba ny tranony sy ny fiainany izy ireo:
Miverina eny an-dalambe ny #СпасЗаВаландово mba hitaky NY FANAFOANANA AVY HATRANY ny fitrandrahana #KazandolMine! Tamin'ny volana lasa, nandrava ny fiarahamoniko ny mpampiasa vola. @VladaMK & PM @Zoran_Zaev – mila anareo izahay mba hanamafy ny lalaonareo.https://t.co/mpk1iCpBL3 pic.twitter.com/V1SFDV6d09on
Nandritra ny fifidianana teo an-toerana tamin'ny herintaona, nampanantena Andriamatoa. Zaev fa hitsahatra amin'ny fanorenana toeram-pitrandrahana ny governemantany. Mipetraka any Strumica, faritra tena iharan'ny fitrandrahana i Zaev tenany. Na izany aza, nilaza ihany koa izy fa tsy azo tontosaina avy hatrany izany satria mbola mila mahazo antoka ny governemanta fa tsy hiteraka fatiantoka ara-bola goavana ho an'ny firenena ny fanafoanana ny fifanarahana noho ny sazy ateraky ny fifanarahana.